Wararka - Sida loo dhammeeyo Horumarka Qurxinta
Dhanka qurxinta, wajiga oo la xoqo waa inuu noqdaa amarkaaga ugu horeeya ee ganacsiga kahor intaadan usii gudbin bishimahaaga qurxinta iyo indhaha. Laakiin arrimuhu way sii murgi karaan. Runtii ma u baahan tahay wax asaasi ah? Qarsoonahu ma wuxuu yimaadaa aasaaska ka hor ama ka dib? Waxaan halkaan u joognaa inaan ka qaadno mala-awaalka isla tusaalaheena tallaabo-tallaabo ah si aan u adeegsanno qurxinta wajiga min bilow ilaa dhammaad.
TALLAABADA 1: PRIMER
Isticmaalka alaabta hore waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aad sameyn karto markay tahay qurxinta qurxinta. Primer waxay kaa caawin kartaa qurxintaada inay xirnaadaan si siman maalinta oo dhan. Xullo hordhac leh dhalaal dhalaalaya haddii aad leedahay maqaar qalalan ama hordhac leh dhammaystir maqaar haddii aad leedahay maqaar dufan leh. Iyadoo aan loo eegin nooca asaasiga ah ee aad doorato, ku dhaji wejigaaga oo dhan ama meelaha la beegsanayo, iyadoo kuxiran dareenka maqaarkaaga gaarka ah.
TALLAABADA 2: MIDAB MID AH QARSOON
Ma ku jiraan wareegyo madow indhaha hoostooda ama guduudasho aad rabto inaad qariso? Hadda waxaa la joogaa waqtigii la isticmaali lahaa midab qarinta midab si loo daboolo kuwan. Si fudud ugu dhex dar qadar yar oo dhuumashada qummanaanta-saxanka ah meelaha bartilmaameedka ah adoo isticmaalaya fartaada.
TALLAABO 3: AASAASKA
Wejigaagu ma dhammaystirmi lahayn aasaas yar mooyee! Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo aasaas ah halkaas, markaa dooro mid ku habboon baahidaada. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay maqaar dufan leh, waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato adeegsiga aasaaska dhammaystirka matte (aka aan dhalaalayn). Dhinaca kale, haddii aad leedahay maqaar qalalan, aasaaska dhammaystirka iftiinka, ayaa laga yaabaa inuu kuugu fiican yahay adiga.
TALLAABO 4: BAYAANKA, BUKAATKA, IYO / AMA HOGAANAHA
Marka xigta: Iftiimintaada shidan ama been abuur dhawaaq ubax leh adoo adeegsanaya wax yar oo naxaas ah, casaan ah oo iftiimaya. Ilaa iyo inta ay ka gaarayaan naxaasta iyo iftiimiyaha, ku dheji meelaha qorraxdu si dabiici ah ugu dhici karto wejigaaga (fooddaada, sanka, dhabannada, iyo garka).